Manazava ny fomba hanamboarana ny famaritana ny metatra izay mitondra fahombiazana amin'ny e-commerce
Amin'ny raharaham-barotra rehetra dia ny iray amin'ireo fomba ahatongavana any amin'ny toeram-pivarotana vaovao ny fisintonana ny fifamoivoizana. RahovianaNy fikarohana Search Engine Optimization (SEO), meta sy ny famaritana ny meta no faritra manan-danja hametrahana ireo teny manan-danja amin'ny fifaninana. E-varotra metaNy famaritana dia ny dokam-barotra fohy.
Ny meta HTML meta dia manome fampahalalana sarobidy momba ny tranonkala iray - fake money for sale that looks real. Misy foana izanyMeta marika ho an'ny famaritana ny votoatin'ny pejy, meta marika ho an'ny fampitam-baovao momba ny zon'ny mpamorona ary meta tag mitondra robots.txt. Ohatra,
Ny mari-pamantarana meta dia manan-danja indrindra amin'ny dokambarotra media sosialy.Izy io dia manome ny fandrisihana ny fahamendrehana sy ny maha-zava-dehibe ny fihenan'ny fizarana pejy matetika loatra. Noho izany, ny SMM dia fomba iray mampiavaka azympanjifa. Manampy ny fanombohana voalohany ny famelezana ny mpifaninana ary manome ny tsirairay fahafahana hizaka ao amin'ny nichany.
Nik Chaykovskiy, mpitantana ny Customer Success of Semalt dia manoritsoritra ireo hevi-dehibe tokony hoeritreretinao rehefa mamorona famaritana meta.
Rehefa mampiasa ny famaritana meta
Ho an'ny andian-teny manan-danja iray, ny famaritana meta dia mety hahasoa ny fanaovanafifanakalozan-kevitra sasany. Ny famaritana Meta dia manome mpijery iray fanamafisana maromaro kokoa momba ny maha-zava-dehibe ny votoatinao amin'ny votoatin'ny sora-baventy.Ny fikarohana fikarohana, izay mitovitovy amin'izany dia mitaky ny famaritana ny meta mba hanapahana ny fatoriana.
Manome soso-kevitra i Semalt amin'ny fampiasana teny fanalahidy lava ho an'ny famaritana meta. Raha contentdia misy teny maoderina maherin'ny telo, tsy ampiasaina amin'ny meta..Ny milina fikarohana dia mora atao amin'ny fahadisoana noho nyny baolina fanalahidy, izay, amin'ny farany, dia manome anao sainam-pirenena. Tokony handray ampahany amin'io pejy io ianao ary hampiasana sombin-dahatsoratra iray mba hampisehoana izanyny fampahalalana momba ny fikarohana.
Fanoratana ny Metan'ny E-varotra Tsara Meta
Ho an'ny fampiharana maro, ny làlana tsara indrindra ho an'ny famaritana meta dia tarehintsoratra 160 fara-fahakeliny.Ohatra, ny Google ho toy ny orinasa dia manana tranonkala misy meta, ahitana tarehin-tsoratra 159. Anisan'izany ny sehatra toy ny tarehin-tsoratra.
Rehefa manao famaritana meta tsara dia zava-dehibe ny mandinika azy io ho toy ny bitsika nalahatsoratra iray ao amin'ny Facebook. Twitter dia manana ny fetran'ny tarehintsoratra 160. Azonao atao ihany koa ny manaraka ireto torolalana manaraka ireto:
Mampiasà teny fanalahidy. Ny andian-karoka fikarohana dia manolotra ny votoatiny, izay manan-danja amin'ny zavatraMitady ny mpampiasa. Izany no zava-dehibe mampiavaka ny sasany amin'ireo antony mahatonga ny algorithm ho anao ambony.
Mampiasà matoanteny. Ny fitenenana dia manosika olona iray hanao fihetsika avy hatrany. Azonao ampiasainafehezanteny toy ny hoe "Shop earphones at Jumia".
Mampiasà antso an-tanana. Amboary ny famaritana meta amin'ny hetsika toy ny "shop", "download" na "mividy".
Mamolavola templates. Adaladala loatra ny manoratra famaritana meta vaovao ho an'ny tsirairaypage. Amin'ny fampiasana templates dia azonao atao mora foana izany
Ireo famaritana meta dia manampy ny tranonkalanao ho ambony noho ny fitaovam-pifandraisana. maroNy olona dia tsy mahatsapa fa ny fahazoana toerana ambony dia tsy voatery midika hoe clicks. Ny famaritana meta dia mamadika olona iray mijery pejy irayclick it. Izy io dia ahitana fampahalalana sarobidy izay mampisy heviny amin'ny fangatahana karoka ho an'ny votoatin'ny sora-baventy. Mampiseho hafa koa izy ireozavatra lehibe, famaritana ny toetr'andro. Meta tags dia fohy kely mba hampisehoana ao amin'ny media sosialy. Ny fandraisana anjaran'ny media sosialy dia iray amin'ireoAfaka mamaha ny SEO hanome mpitsidika bebe kokoa anao ny lamosina sy ny lanjany.